२०७५ मङ्सिर १५ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रमा खुल्ला शौच गर्नेहरू बढे
ओमप्रकाश, धर्मेन्द्र, नरेश, १४ मङ्सिर/ पर्सा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त क्ष्Fेत्र घोषणा गर्ने अभियान एकातर्पm जारी छ भने अर्कोतर्पm खुल्ला दिसामुक्त क्ष्Fेत्र घोषणा भएका स्थानहरूमा खुल्ला शौच गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ । ठोरी, पटेर्वा सुगौली, जीराभवानी गाउँपालिका पूर्णरूपमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका गापा हुन् तर यी क्ष्Fेत्रमा अहिले खुल्ला दिसा गर्नेहरूको सङ्ख्या पचास प्रतिशत पुग्न लागेको छ । खुल्ला दिसामुक्त क्ष्Fेत्र घोषणा अभियानमा लागेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, विकास नेपाल, डिवाइसी, एवाइसी, ब्रिलेन्ट युवा क्लबलगायतका संस्थाहरूले खुल्ला दिसा गर्दा हुने हानिनोक्सानीका बारेमा सचेतना गराउनेभन्दा पनि वडा र गापालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा मात्र गराउनेतर्पm कार्यक्रम लक्षित गरेकाले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएर पनि अहिले ती क्षेत्रमा शौचालयबाहिर खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । पटेर्वा सुगौली गापा निवासी राजटौकुमारी चौधरीले खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न हतारमा अस्थायी शौचालयको निर्माण गरेको र अहिले ती शौचालयहरू बिग्रिंदा बनाइदिने संस्था
आलुमा डढुवा रोग
प्रस, पचगावाँ, १४ मङ्सिर/ पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा किसानहरूले लगाएको आलुमा डढुवा रोग देखा परेको छ । कृषि शाखाका कर्मचारीहरूले अनुगमन गरेपछि आलुमा लागेको रोग डढुवा भएको बताइएको छ । गापा अन्तर्गतको कृषि शाखामा किसानहरूले आलुखेतीमा रोग लागेर पात सुक्न थालेको गुनासो गरेका थिए । किसानहरूको गुनासोपछि कृषि शाखाका कर्मचारीहरूले अनुगमन गरी डढुवा रोग लागेको बताएका हुन् । उनीहरूले डढुवा रोग लागेको आलुबालीमा पात सुक्ने र रोगले जरासम्म असर पुग्ने बताए । कृषि शाखाका कर्मचारीले डढुवा रोगविरुद्ध डाइपेन, साफ, अनुस्टिन, माइकोजेन कीटनाशक औषधि एक लिटर पानीमा २–३ ग्राम मिलाएर छर्न सुझाव दिएका छन् । कृषि शाखा संयोजक कैलाश पण्डितले किसानहरूले भने अनुसारको औषधिको प्रयोग गरेको खण्डमा डढुवा रोगबाट उन्मुक्ति मिल्न सक्ने बताए । पटेर्वा सुगौलीका भगवती चौधरीले सो क्ष्Fेत्रको अधिकांश आलुखेतीमा डढुवा रोग लागेकोले पात पहेंलो हुने र जरा सुक्नेजस्ता समस्या देखिएको बताए ।
भारतीय ढुवानी व्यवसायी चोरीको गाडी प्रयोग गर्छन् प्रस, परवानीपुर, १४ मङ्सिर/ भारतबाट मालसामान बोकेर नेपाल आउने दुईवटा ट्रक एउटै नम्बरको फेला परेपछि भारतीय ढुवानीकर्ताहरू अवैध सवारीसाधनबाट मालसामान ढुवानी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार गुल्म वीरगंजको शाखाको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प आइसिपीको टोलीले शुक्रवार दिउँसो आइसिपीबाट एउटै नम्बरको दुईवटा भारतीय टेलर बरामद गरी वीरगंज भन्सार बुझाएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक खड्काका अनुसार एउटा गाडी मालसामान बोकेर आइसिपीबाट निस्कन लागेको र अर्को नेपालबाट मालसामान खाली गरेर भारत फर्कन लागेको अवस्थामा गोप्य सूचनाको आधारमा एउटै नम्बरका दुईवटा ट्रकलाई समातेको हो । सप्रनाउ खड्काले एउटै नम्बर राखेर दुईवटा सवारीसाधन मालसामान बोकेर आवतजावत गर्नु अवैधानिक हो भने । सशस्त्रले जिजे २३ वाइ ८८६१ नं.प्लेट भएको चेचिस नं.MB1A3EHD3HAXG9165 र अर्को चेचिस नं. MB1A3EHD9HAVH1335को गरी दुईवटा टेलर बरामद गरेको हो । ती सवारीसाधनका इन्जिन नम्बर पनि दुईवटा छन् । टेलरहरू आवश्यक छानबिनको लागि वीरगंज भन्सारको मु
प्याब्सन टी–२०ः मनकामना, गौतम र लिटिल एन्जल्स विजयी
प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/ नारायणी रङ्गशालामा जारी प्याब्सन टी–२० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रवार सम्पन्न तीन खेलमा मनकामना, गौतम र लिटिल एन्जल्स मावि विजयी भएका छन् । पहिलो खेलमा निर्धारित १५ ओभरमा वीरगंज पब्लिक स्कूलले ६ विकेट गुमाउँदै १०२ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा मनकामना माविले ४ विकेट गुमाउँदै १०.४ ओभरमा १०३ रन बनाएको थियो । सो खेलको म्यान अफ दि म्याच मनकामनाका इमामुल हक भए । त्यस्तै, दोस्रो खेल गौतम र एमइएस माविबीच भएकोमा एमइएसले ११ ओभरमा १० विकेट गुमउँदै ३५ रन मात्र बनाउन सक्यो । प्रतिउत्तरमा गौतमले ९.१ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा ४० रन बनाएको थियो । सो खेलको म्यान अफ दि म्याच गौतमका समराग लामिछाने घोषित भए । तेस्रFे खेलमा मेरीगोल्डले १४.३ ओभरमा १० विकेटको क्षतिमा ७९ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा लिटिल एन्जल्सले ९.५ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै ८१ रन बनाएको थियो । यस खेलको म्यान अफ दि म्याच लिटिल एन्जल्सका विक्की गुप्ता घोषित भएको खेल संयोजक इमामुद्दीन अहमदले जानकारी गराए ।
जगदीश शर्मा गताङ्कको बाँकी... बिहान उठ्न अलि ढिलो भयो । स्नानादिबाट निवृत्त भएर बाहिर निस्कँदा ६ बजिसकेको थियो । धर्मशालाको आँगनले भर्खरै पानी परेको आभास दिइरहेको थियो । शहरबीचको कुरा हो, पानी परे कतै ओत लागूँला भन्ने सोचेर प्रातः भ्रमणमा निस्कें । आकाशमा मेघ थियो । मौसम अलि ठण्ढा, बजारमा निकै भीड थियो । सामुन्ने नै रेलवे स्टेशन थियो, भीड हुनु कुन ठूलो कुरो । दुई किलोमिटर जति हिंडेपछि टाउकोमा एक थोपा पानी प¥यो । म फर्कें । धर्मशालाको कार्यालयमा लोकनाथजी थिएनन् । कोठातिर जाँदा बाटोमा भेटिए र मैले स्वामीजीसँग कुरा गर्ने इच्छा जाहेर गरें । उनले लगे । ९६ वर्ष उमेर काटेका स्वामी श्यामसुन्दरजी अखबार पढ्दै थिए, आँखामा चश्मा थिएन । लोकनाथजीले कानैमा गएर भने ‘उहाँ नेपालबाट आएको पत्रकार, तपाईंको दर्शन गर्न आउनुभएकोै’–बताए । मैले नमस्कार गरें, उनले आशीर्वादको मुद्रामा हात उठाएँ । मैले उनीबारे जान्ने उत्सुकता प्रकट गरें । सुनेनन्, लोकनाथजीले सबै जिज्ञासा अर्का स्वामीले शमन गरिदिन्छन््, उतै जाउँ भने । मैले एउटा फोटो खिंचूँ भनी अनुमति मागें । सहर्ष तयार भएर मलाई पनि आपूm छेऊ आउन इशारा गरेर मे
उमाशङ्कर द्विवेदी मानिस जुन बुद्धिद्वारा धर्म र अधर्मलाई तथा कर्तव्य र अकर्तव्यलाई पनि यथार्थरूपले जान्दैन, त्यो राजसी बुद्धि हो तथा जुन तमोगुणबाट घेरिएको बुद्धि अधर्मलाई पनि ‘यो धर्म हो’ यस्तो मान्दछ तथा यसै प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई विपरीत मान्दछ, त्यो तामसी बुद्धि हो । पार्थ, जुन अव्यभिचारिण धारणशक्तिबाट मानिस ध्यानयोगद्वारा मन, प्राण र इन्द्रियहरूको क्रियालाई धारण गर्दछ, त्यो धृति साŒिवक हो र पृथापुत्र अर्जुन, फलको इच्छावाला पुरुष जुन धारणशक्तिद्वारा अत्यन्त आसक्तिले धर्म, अर्थ र कामहरूलाई धारण गरिरहन्छ, त्यो धारणशक्ति राजसी हो । पार्थ, दुष्ट बुद्धिवाला मानिस जुन धारणशक्तिद्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, दुःख तथा उन्मत्ततालाई पनि छाड्दैन, त्यो धारणशक्ति तामसी हो । अर्जुन, अब तीन प्रकारका सुखलाई पनि तिमी मबाट सुन । जुन सुखमा साधक भजन, ध्यान र सेवादिको अभ्यासमा रमण गर्दछ र जसबाट दुःखको अन्तलाई प्राप्त भइहाल्दछ– जुन यस्तो सुख छ, त्यो प्रथम यद्यपि विषतुल्य प्रतीत हुन्छ, तर परिमाणमा त्यो अमृततुल्य छ, त्यसैले त्यो परमात्मविषयक बुद्धिको प्रसादबाट उत्पन्न हुने सुख साŒिवक हो । जुन स
यसपालि पनि पानी पा¥यो इनारले
सञ्जय मित्र विश्वासको आधार के होला ? झन् पुरातन जमानादेखि चल्दै आएको लोकविश्वास कति विश्वसनीय होला ? लोकआस्था र अन्धविश्वासका वैज्ञानिक आधारहरू प्रस्टिने भए यस प्रकारका प्रश्नहरू उम्रिने नै थिएनन् । संसारमा बिनाआधार उब्जिने कुरो नै प्रश्न हो । प्रत्यक्ष आधार र प्रमाण हुँदा तथा सबै प्रमाणहरू हुँदा त सत्यलाई समेत साबित गर्न प्रश्नहरू जन्मिन्छन् भने प्रश्न नजन्मिने प्रश्न नै हुँदैन । यो यही आधार हो, जसले सबै प्रश्नकर्तालाई चुप लगाउँछन् । हो, विश्वासको कुनै आधार हुँदैन । विश्वासको आधार पनि हुन्छ । यस्तै विश्वासको आधार पानी पर्नुसित रहेको छ, फोटोमा रहेको इनारमा । इनारमा विश्वास अल्झेको छ । विश्वास डुबेको छ । इनारको गहिराइमा लोकविश्वासको जरो रहेको छ । यसले स्थानीयलाई सदैव आप्mनो विश्वासमाथि विश्वास गर्न कर लाउँछ । आप्mनै विश्वासमाथि प्रश्न उब्जाउने चेतनामाथि प्रश्न उब्जाउँछ । कसैले विश्वासको आधार माग्यो भने मौकामा उपस्थित हुन आग्रह हुन्छ । उपस्थित हुनेले आप्mनो अविश्वासको पर्दा हटाएर विश्वास गर्न बाध्य हुन्छ र आपैंmभित्र एउटा प्रश्न उब्जाउन बाध्य बनाउँछ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यो क
के नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेकै हो त ?
वैद्यनाथ ठाकुर मानिसहरूको सम्पूर्ण गतिविधिलाई मुख्यरूपमा प्रभावित पार्ने तŒव हो उसको आर्थिक अवस्था । अर्थ यस्तो कुरा हो जसले मानिसको काम, तरिका, सोचाइ, धारणालाई डो¥याइरहेको हुन्छ । अर्थ भनेपछि मानिसको दैनिकरूपमा वृद्धि विकास तथा जीवननिर्वाह कसरी भएको छ वा भइरहेको छ, त्यसलाई नै बढी बुभ्mनुपर्छ । अर्थात् आर्थिक क्रियाकलाप सोभैm उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । मानिसहरू के उत्पादन गर्छन् ? कसरी उत्पादन गर्छन् ? उत्पादन प्रणालीमा उसको भूमिका के हो ? उत्पादनमाथि उसको स्वामित्वको अवस्था कस्तो छ ? इत्यादि प्रश्नहरूको उत्तरमा उसको जीवनवृत्ति, व्यवहार, राजनीति, संस्कृति, विचार आदि सबै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । यस अर्थमा एउटा निश्चित उत्पादन प्रणालीलाई एउटा नयाँ युगको रूपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ । किनभने उत्पादन प्रणालीको एउटा छुट्टै प्रकारको वस्तुगतरूपमा चरित्र जनमानसमा देखिन्छ । त्यसैले जबजब उत्पादन प्रणाली फेरिन्छ अनि हामी भन्न बाध्य हुन्छौं कि पुरानो युग सकियो र नयाँ युगको सुरुआत वा जन्म भएको छ । यस अर्थमा मानवसमाजले विकासका विभिन्न युगहरू पार गरेको छ । ती सबै युगभित्र पनि विभिन
सेना भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता
नेपाली सेनाको भर्नामा अनियमितता गर्ने सेनानीसहित १७३ जना कारबाईमा परेका छन् । विसं २०७३ देखि २०७५ सम्मको भर्ना प्रक्रियामा अधिकारप्राप्त सेनाका अधिकारीहरूले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ । जनगुनासा हुँदै भ्रष्टाचारका कुरा सङ्गठनभित्र समेत आएपछि सेनाको मुख्यालयले सहायक रथीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा जङ्गी अड्डाले उनीहरूमाथि कोर्टमार्शल गरेको हो । उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपितहरूसँग बयान लिई पैmसला सुनाएको छ । सैनिक अदालतले अभियुक्तहरूको कसूर अनुसार कैद सजाय, बर्खास्त, घटुवा र दण्ड जरिवानासमेत सुनाएको छ । सैन्य भर्नामा मापदण्ड अनुसार उचाइ नपुगेका, तौल पूरा नभएका, शारीरिकरूपमा अयोग्य र स्वास्थ्यको मापदण्डसमेत पूरा नगरेको फेला परेको छ । अचम्मलाग्दो कुरा त भर्नाको लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी राखेर परीक्षा दिलाएको कुरा अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उक्त अनियमितता अधिकारीहरूले घूस तथा पैसाको प्रलोभन तथा चलखेलमा गरेको खुलासा भएको छ । अनियमिततामा संलग्न १९ जन
२०७५ मङ्सिर १४ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच नभएसम्म महिला हिंसा अन्त नहुने ः उपप्रम यादव
जनकपुरधाम, मङ्सिर १३/ उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच नभएसम्म महिलामाथि हुँदै आएको हिंसा अन्त्य नहुने बताएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा जनकपुरमा आयोजित १६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै उनले सामाजिक समानताको अवधारणा लागू गरिएमात्र लैङ्गिक हिंसा अन्त हुने बताए । उनले हाम्रो गलत परम्परा र गलत रीतिरिवाजले नै महिला हिंसालाई बढावा दिएको उल्लेख गर्दै यसविरुद्ध समाजलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले पितृ सत्तात्मक सोचको कारण लैङ्गिक हिंसामा वृद्धि भइरहेको उल्लेख गरे । उनले अहिले महिलामात्र नभई पुरुष, तेस्रो लिङ्गीसमेत हिंसामा परिरहेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री राउतले लैङ्गिक हिंसाको घरबाटै शुरू हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अभिभावकलाई यसमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक म
सरकारी भवन निर्माणमा पनि अवैध काठ प्रयोग
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण कार्यमा अवैधरूपले जङ्गल फडानी भएर भिœयाइएको काठ प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी भवन निर्माणमा अवैध काठको प्रयोग बढ्दो छ । समिलमा प्रतिक्युफिट ४ हजार ५ सयसम्म मोल पर्ने हुनाले जङ्गल फडानी भएर भित्रिएका काठको प्रयोग बढेको हो । काठ तस्करहरूबाट सस्तो मूल्यमा काठ खरीद गरेर निजी क्षेत्रका भवनहरू यस अघि पनि निर्माण भइरहेका थिए भने अहिले सरकारी भवन पनि अवैध काठबाट निर्माण भइरहेको छ । अवैध काठ प्रतिक्युफिट रु २ हजारसम्म पर्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका स्वास्थ्य चौकी, स्कूल, वडा कार्यालय आदिमा उपभोक्ता समिति, ठेकेदारले तस्करीबाट आएको काठ प्रयोग गरेका छन् । एकजना उपभोक्ता समितिका सदस्यले तस्करीबाट आएको काठ उपभोक्ता समितिले खरीद गरेर प्रयोग गरेको र समिलबाट भ्याट रकम तिरेको बिल लिएर फछ्र्योट गर्ने गरेको बताए । स्रोतले पटेर्वासुगौली गापाको २ नं. वडासमिति कार्यालय, बितो महतो जनता मावि, वडा नं. ५ मा धर्मशाला, जगरनाथपुर गाविसमा स्वास्थ्यचौकी, गापा कार्यालय, वडा नं. २
प्याब्सन टी–२० क्रिकेटः गोल्डेन फ्युचर, हिमालयन र ज्ञानज्योति विजयी
प्रस, वीरगंज, १३ मङ्सिर/ वीरगंजको नारायणी रङ्गशालामा जारी प्याब्सन टी–२० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीवार सम्पन्न तीनवटा खेलमा गोल्डेन प्mयुचर, हिमालयन मावि र ज्ञानज्योति माविले विजयी भएको छ । आज भएको पहिलो खेलमा गोल्डेन प्mयुचरले निर्धारित १५ ओभरको खेलमा १० विकेट गुमाएर ७३ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा ज्ञान सरोवरले १० विकेटको नोक्सोनीमा ५५ मात्र रनमा मात्र सीमित भयो । खेलको म्यान अफ दि म्याच गोल्डेन प्mयुचरका रञ्जीत सर्राफ घोषित भए । त्यस्तै दोस्रो खेलमा हिमालयन माविले अल्पाइनलाई ४ विकेटमा पराजित ग¥यो । अल्पाइनले ब्याटिङ गर्दै ७ विकेटको नोक्सानीमा ९४ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा हिमालयनले १३.२ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ९५ रन बनाउन सफल भयो । यो खेलका म्यान अफ दि म्याच हिमालयनका साहेब अन्सारी घोषित भए । तेस्रो खेलमा ज्ञानज्योतिले वीरगंज एकेडेमीलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै विजयी भयो । वीरगंज एकेडेमीले १० विकेटको क्षतिमा ९२ रन मात्रै बनाउन सक्यो भने प्रतिउत्तरमा ज्ञानज्योतिले ४ विकेटको क्षतिमा ११.५ ओभरमा ९८ रन बनाएको थियो । यो खेलको म्यान अफ दि म्याच ज्ञानज्योतिक
भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्रलाई
प्रस, पोखरिया, १३ मङ्सिर/ कालिकामाई गाउँपालिकाद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी एपिएफ टिमले हात पारेको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच भएको फाइनल भिडन्तमा सशस्त्रले जित हासिल गरेको हो । प्रथम हुने टिम सशस्त्र प्रहरीलाई रु १ लाख नगद, शिल्ड तथा प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरियो । त्यसैगरी दोस्रो हुने नेपाल प्रहरी टिमलाई ५० हजार नगद, शिल्ड र प्रमाणपत्रसहित सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रमका मुख्य अतिथि पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकाल, विशिष्ट अतिथि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेमध्वज शाह र अतिथिहरूले विजयी तथा उपविजयी टिमलाई सम्मान गरेका थिए । नेपाल र भारतका विभिन्न आठवटा टिम सहभागी उक्त प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिज नेपाल प्रहरीका कुलबहादुर थापा घोषित भए भने फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच सशस्त्र प्रहरीका विजय थापा घोषित भए । पूर्व गाविस अध्यक्ष्F राजेन्द्र कुर्मीले उनीहरूलाई सम्मान गरेका थिए । कालिकामाई–१ का वडा अध्यक्ष शिवनाथ पटेलको अध्यक्ष्Fतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष पवन तिवारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
समावेशी विकास र प्रदेश नं २
शीतल महतो आर्थिक समृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन भई अहिले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयामबाट हेर्ने विस्तृत दृष्टिकोण स्थापित भएको छ । अस्सीको दशकदेखि दिगो विकास र वातावरणबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध खोजिएको थियो भने अहिले चक्रीय विकासको अवधारणा विश्वव्यापी भएको देखिन्छ । यसले उत्पादनका साधनको निरन्तरतालाई जोड दिएको छ । नब्बेको दशकमा मानवीय मान्यतामा आधारित विकास र आर्थिक वृद्धि तथा समन्यायबीच सम्बन्ध खोजिएको थियो । जसलाई मानव विकास भन्न थालियो । अहिले समावेशी विकासको अवधारणा अगाडि आएको छ । विशेषगरी समावेशी विकासलाई तीन तहमा हेर्ने गरिन्छ । सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय समावेशिता र सम्बन्धपरक समावेशिता । सामाजिक समावेशिताको जग भनेको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, पुनर्वितरण, सन्तुलित विकास, व्यक्तिको क्षमताको विकास र पहिचान एवं स्वामित्वबोधको स्थापना हो । स्वाभिमान, सम्मान, पहिचान र सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाजको स्थापना गर्न मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति, पुनस्र्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अथक योद्धाको रूपमा सङ्घर्
विश्वराज अधिकारी ५. प्रमापीकरण अमेरिकी अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न विशेषता छन् । ती विशेषताहरूले नै अमेरिकालाई विश्वको सर्वाधिक ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन सहयोग पु¥याएको हो । तिनै विशेषताहरूमध्ये एक हो, अमेरिकामा हरेक वस्तुको एक निश्चित प्रमाप (क्तबलमबचम) हुन् । वस्तुहरूको प्रमापीकरण गर्नु । अर्थात् हरेक वस्तुको प्रमापीकरण (क्तबलमबचमष्शबतष्यल) गरिएको हुन्छ। हरेक वस्तुको प्रमापीकरण मात्र होइन, नामाकरण (द्यचबलमष्लन) पनि गरिएको हुन्छ । यहाँसम्म कि फलपूmल, तरकारी, अन्डा, दूूुध, दही, साग आदिको पनि नामाकरण गरिएको हुन्छ । यसरी हरेक वस्तुको नामाकरण गरिएकोले कुन वस्तु कुन उत्पादकको हो भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी बजारमा कुन उत्पादकको वस्तु असल र कुन उत्पादकको खराब छ भन्ने कुरा वस्तुमाथि लेखिएको नाम (ब्रान्ड) बाट थाहा पाउन सकिन्छ । यो कारणले गर्दा हरेक उत्पादक बजारमा स्तरीय वस्तु ल्याउन बाध्य हुन्छन् । खराब ल्याएमा वस्तु र उत्पादक, दुवैको ख्यातिमा असर पर्ने हुनाले उत्पादकहरू जहिले पनि स्तरीय वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्न सचेत हुन्छन् । प्रमापीकरण भनेको के हो ? प्रमापीकरण भनेको हरेक व
राष्ट्रियता र एकताको कुरा
विनोद गुप्ता चीनमा एउटा उखान प्रचलित छ– धनी हुन चाहन्छौं भने पहिले सडक बनाऊ । यही भनाइ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति स्व. जोन एफ केनेडीको पनि थियो । उनले अमेरिकाको समृद्धिबारे बोल्दै भनेका थिए, हामी धनी छौं किनभने हामी सडकमा धनी छौं । यो भनाइ र यो सन्दर्भ जोड्न सकिन्छ । चीनको इलभ द्यभति यलभ च्यबम (इद्यइच्) योजनासँग । यो योजनाले चीनको पुरानो सिल्क रोडलाई पुनर्जीवन दिंदै यातायात र व्यापारको माध्यमबाट एशिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्न खोजेको छ । चीन अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूको लागि आकर्षक व्यापार गन्तव्य बन्न थालेको छ । यसको कारण के हो भने चीनका योजनाहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्पm बढी केन्द्रित रहने गरी चीन सरकारको फर्महरूबाट सञ्चालित हुन्छन् जसका कारण नोकरशाहको झन्झटबाट मुक्त रहँदै समयमा योजना सम्पन्न हुन्छ र यसले आर्थिक विकासमा देखिनेगरी सहयोग पुगेको हुन्छ । चीनले यो कार्यविधि आप्mनो प्रगतिको अनुभवको आधारमा तय गरेको छ जसले आर्थिक विकासलाई उत्तम विकल्प मान्दै आएको छ । विश्वकै अर्को ठूलो दातृराष्ट्र अमेरिका भने पश्चिमीशैलीको प्रजातन्त्रको विकासबाट सुशासन र मानव अधिकार तथा जनस्वा
यसरी सोचे के होला ?
मन र मस्तिष्कलाई एकाकार बनाएर कुनै काम गरिन्छ भने त्यो स्थायी र लाभदायक हुन्छ । मन एकातिर, मस्तिष्क एकातिर छ र काम गरेको देखाउनुमात्र छ भने त्यसको अत्युत्तम उदाहरण चुरे विनाशमा हेर्न पाइन्छ । चुरेको दोहनले तराईको भूभाग मरुभूमि बन्दैछ–पानीका जरुवा सुुक्दैछन्, वन–जङ्गलमा क्षति पुगिरहेको छ, स्थानीयलाई वनजङ्गलबाट लाभ हुनुपर्नेमा उल्टो बाढी, पहिरोजन्य नोक्सान मात्र भइरहेको छ । यसको रोकथामका लागि हिजोदेखि नै केन्द्र सरकार उदासीन थियो, आज नजानेर वा बुद्धि खियाउन नसकेर न प्रदेश सरकारहरूले यसबारे केही गर्न सकेका छन्, स्थानीय तह त पहिलेदेखि नै ‘पूरब दिखाकर पश्चिम मारो’ नीतिमा चलिरहेका छन् । स्थानीय तहलाई चुरे विनाशबाट सबैभन्दा बढी र तत्काल नोक्सान भइरहेको छ, तर तिनै स्थानीय तह ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न हौंसिने गर्दछन् । निजगढ नगरपालिकाले चुरे विनाशको प्रबल कारण बनेको नदीखोलाको अवैज्ञानिक उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको छ । र उसैले नदी उत्खननसम्बन्धी आचारसंहिता पनि बनाउन थालेको छ । यो रामकहानी निजगढ नगरपालिकाले मात्र गरेको होइन, अवसर पाएका सबै नपा/गापाले गरिरहेका छन् । यो त
२०७५ मङ्सिर १३ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
विवाद समाधान गर्न निजगढमा खोला अनुगमन समिति
प्रस, निजगढ, १२ मङ्सिर/ निजगढस्थित बकैया खोलाको उत्खनन विवादबारे सर्वपक्षीय छलफल बुधवार निजगढमा सम्पन्न भयो । छलफलका सहभागीहरूले विवाद समाधानका लागि निजगढ नगरप्रमुख सुरेशकुमार खनालसमेत रहने गरी खोला अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सर्वपक्षीय छलफलको सुझाव अनुसार २९ सदस्यीय खोला अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय नगरपालिकाले बुधवारै गरेको निजगढ नगरप्रमुख खनालले जानकारी गराए । निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेपछि ठेक्का सकार गरेको ओम सप्लायर्स कलैयाले खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तु ग्राभेल, बालुवा, ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले उक्त कार्यको विरोध गर्दै पटकपटक अवरोध गर्दै आइरहेका थिए । निजगढ नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समिति कलैया बाराको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पुलको उत्तरतर्पm प्लट नं ३ को खोलाबगर बीचमा ठेकेदारले स्काभेटरद्वारा उत्खनन गर्न थालेका थिए । स्थानीयको विरोधपछि उत्खनन कार्य स्थगित छ । आजको छलफलमा सहभागी अधिकांशले उत्खनन गर्ने नाममा ठेकेदारलाई मनोमानी ढङ्गले कार्य गर्न दिन नहुने तर बस्ती, वन, ड्याम, पुललगायतका संर
किर्ते र दोहोरो नागरिकतामा दुईजनाविरुद्ध कारबाई शुरु
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले किर्ते गरी नागरिकता लिएको र दोहोरो नागरिकता लिएको कसूरमा वीरगंज–९ का दुईजनाविरुद्ध कानूनी कारबाई शुरु गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले वीरगंज महानगर–९ बस्ने २३ वर्षीय दिनेश साह र सोही वडा निवासी ३७ वर्षीय अरबिन्द सर्राफलाई किर्ते र दोहोरो नागरिकताको कसूरमा कारबाई शुरु गरेको बताए । प्रउ ढकालले दिनेश साहले तीन दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा राहदानी लिनको लागि दिएको आवेदनमा कारबाई हुँदा निजले पेश गरेको २०६८ सालमा लिएको अङ्गीकृत नागरिकता जिप्रकाको तथ्याङ्कमा अर्कै व्यक्तिको नाममा जारी भएको पाइएपछि किर्तेमा कारबाई गरिएको बताए । दनेशले पेश गरेको नागरिकता विश्रामपुरका एक व्यक्तिको नाममा जारी भएको पाइएको थाहा हुन आएको छ । प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा दिनेश भारतीय नागरिक भएको र उनको बसोबास हालै मात्र वीरगंज–९ मा भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी, प्रहरीले भारतीय नागरिकता भएका सोही वडा निवासी अरबिन्द सर्राफलाई पनि पक्राउ गरेको छ । छोराको नागरिकता बनाउनका लागि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएपछि उनीविर
झडपमा घाइते साहको मृत्यु
प्रस, रौतहट, १२ मङ्सिर/ गौर नगरपालिका पुरेनवा निवासी बेदामी साहको बुधवार मृत्यु भएको छ । वीरगंजस्थित न्युरो हस्पिटलमा उपचारको क्रममा साहको मृत्यु भएको हो । विद्यालय जाने छात्राहरूलाई जिस्काएको निहुँमा यही मङ्सिर १ गते झडप हुँदा पाँचजना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये साहलगायत तीनजनाको अवस्था गम्भीर थियो । गौर नगरपालिका–८ पुरेनवाबाट विद्यालय पढ्न आउने छात्राहरूलाई बरहवा खोलास्थित झोलुङ्गे पुलमा वडा नं ५ का केही केटाहरू बसेर जिस्काउने गरेका थिए । छात्राहरूले आआप्mनो अभिभावकलाई भनेपछि केटाका अभिभावकलाई सम्झाउन जाँदा वादविवाद भई झडप भएको थियो । झडपमा परी छात्रापक्षका वडा नं ८ पुरेनवाका ५० वर्षीय बदामी साह, २८ वर्षीय शिकारचन राम र २४ वर्षीय अनिल साहसहित ५ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये बदामीको टाउकोको हड्डी भाँचिएको, राम र साहको पनि टाउकोमा चोट लागेको थियो । उनीहरूलाई उपचारको लागि वीरगंज पठाइएको थियो । वीरगंजस्थित न्युरो अस्पतालमा तीनैजनाको उपचार भइरहेको अवस्थामा आज साहको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक केदार ढकालले सातजनामाथि किटानी जाहेरी रह
सिम्रौनगढ नगरपालिका टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु
प्रस, सिम्रौनगढ, १२ मङ्सिर/ सिम्रौनगढ नगरपालिका टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सिजन–६ बुधवारदेखि शुरु भएको छ । पूmलबारी क्रिकेट मैदानमा नगरप्रमुख विजयशङ्कर यादवले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए । सो अवसरमा उनले विश्वमा लोकप्रिय क्रिकेट खेलमा नेपालको प्रयास पनि सराहनीय भएको बताए । उनले क्रिकेटप्रतिको आकर्षण गाउँगाउँमा बढ्दै गएको बताउँदै क्रिकेटबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउने वातावरण बनिरहेको बताए । उनले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च गर्न नगरपालिकाले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । प्रमुख यादवले पूmलबारी मैदानको स्तरोन्नतिको लागि नपाले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिम्रौनगढका अध्यक्ष्F जयन्त कुशवाहाको अध्यक्ष्Fतामा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा योजना अधिकृत राजीव यादव, खेलाडी मनीर आलम, स्थानीय समाजसेवी भारती बाबा, शेख मुमताज, शङ्कर साह कानु, शिक्षक ध्रुव कुशवाहा, नुरआजम सिद्धिकीले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सञ्जय गुप्ताले स्वागत र अरविन्द महतो नुनियाले सहजीकरण गरेका थिए । उद्घाटन खेलमा भारतको लखौरा क्रिकेट टिमले रौतहटको पोठिया
प्रस, कलैया, मङ्सिर १२/ कलैया उपमहानगरपालिका–१३ बलिरामपुरमा कुस्ती प्रतियोगिता शुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख राजेशराय यादवले बुधवार प्रतियोगिता उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा नगरप्रमुख यादवले मधेसको संस्कृतिको रूपमा रहेको कुस्ती खेललाई सबैले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । खेलले अनुशासन सिकाउने र अनुशासित व्यक्तिबाट नै सभ्य समाज निर्माण हुने भएकोले खेलको ठूलो महŒव रहेको उनले बताए । मुलुकको राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लाबाट ३० जना कुस्ती खेलाडीसहित भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थानलगायतबाट ७० जना कुस्ती खेलाडीको प्रतियोगितामा सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल प्रतियोगिता सेमिफाइनल र फाइनल एकैदिन
प्रस, पोखरिया, १२ मङ्सिर/ कालिकामाई गाउँपालिकाद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि बिहीवार सेमिफाइनल र फाइनल खेल सम्पन्न हुनेछ । बुधवार क्वार्टरफाइनल र सेमिफाइनलको एक/एक खेल भएकोमा सेमिफाइनल खेलको बाँकी एक खेल भोलि बिहान खेलाएर फाइनलमा पुग्ने टिमको टुङ्गो लगाइनेछ । क्वार्टरफाइनल खेलमा भारतको आजमगढ विजयी भयो । आजमगढले बेस्ट अफ फाइभमा तीनवटा खेल जितेर विजयी भएको थियो । उसले भारतकै छपरालाई दुईका विरुद्ध तीन खेलमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको निर्णायक रामनाथप्रसाद कुशवाहाले बताए । सेमिफाइनलमा बिहीवार आजमगढ र नेपाल प्रहरी भिड्नेछन् । यसैगरी, आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलको निर्णय हुन सकेन । पाँच राउन्डको खेलमा सुखवाप्रसौनी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)ले दुई/दुई राउन्डको खेल बराबरी खेलेपछि एक खेल समयाभावले हुन सकेन । भोलि निर्णायक खेल हुनेछ । निर्णायक कुशवाहाले भोलि बिहीवार एकैदिन सेमिफाइनल र फाइनल खेल हुने बताए ।
प्याब्सन टी–२० ः ओम नेशनल, सनलाइट र मास्कोट विजयी
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/ वीरगंजको नारायणी रङ्गशालामा जारी प्याब्सन टी–२० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधवार सम्पन्न तीनवटा खेलमा ओम नेशनल, सनलाइट र मास्कोट एकेडेमी विजयी भएको खेल संयोजक इमामुद्दीन अहमदले बताए । आज भएको पहिलो खेलमा ओम नेशनलले कञ्चनजङ्घालाई १२९ रनको विशाल अन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दै ओम नेशनलले निर्धारित १५ ओभरको खेलमा ४ विकेट गुमाएर १५८ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा कञ्चनजङ्घा ७.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २९ रनमा सीमित भएको थियो । यस खेलको म्यान अफ दि म्याच अभिषेक गिरी घोषित भए । दोस्रो खेलमा सनलाइटले मूनलाइटलाई २४ रनअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दै सनलाइटले निर्धारित १५ ओभरको खेलमा ५ विकेट गुमाएर ९३ रन जोडेको थियो । प्रतिउत्तरमा मूनलाइट १५ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ६९ रनमा सीमित भयो । यस खेलको म्यान अफ दि म्याच विकाश राम घोषित भए । तेस्रो खेलमा मास्कोटले ग्रेसलाई १५ रनअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दै मास्कोटले निर्धारित १५ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ९६ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा ग्रेस १५ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ८१ रनमा सीमित भयो । य
विपन्नको सुरक्षाको दिन पनि आउला कि ?
सञ्जय साह मित्र सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको छ । यसको सुरुआत निकै सकारात्मक लक्ष्य लिएर गरिएको हो । यसको सुरुआत गरिएको दिन देशको धेरै ठाउँमा मैनबत्ती बालिएको थियो । मैनबत्तीले केही समय दीपावलीकै अनुभूति गरायो । औद्योगिक प्रतिष्ठान र सङ्गठित व्यवसायमा संलग्न मजदुरहरूले यो खबर सुनेर साँच्चिकै खुशी भएका थिए । ठूला उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले खुशीलाई सार्वजनिक गर्न उत्साहित थिए । मिठाइ पनि बाँडेर खाएको पनि देखिएको थियो । मिठाइ बाँडेर खुशी व्यक्त गर्नु चानचुने कुरै होइन । तर साना उद्योग तथा प्रत्यक्षरूपमा कुनै उद्योगको मालिकको अगाडि नै काम गर्ने मजदुरहरूले भने यस कुरालाई सुन्न पनि सकेनन् । सुने पनि बुभ्mन पाएनन् । कतिपयले सुनेपछि यसलाई अरूबाट बुभ्mने काम पनि गरेका छन् र बुझेर पनि खुशी मनाउन पाएनन् । सामाजिक सुरक्षा वास्तवमा सबैका लागि खुशीको कुरा भएको छ । कमसेकम पन्ध्र वर्षसम्म कुनै पेशा वा व्यवसायमा निरन्तर संलग्न रहेर राज्यले बनाएको कार्यविधि अनुसार निरन्तर निश्चित रकम जम्मा गरेमा हरेक व्यक्तिले यसबाट धेरै किसिमको लाभ पाउने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा अभियान भएकोले यसलाई सु
किसान सचेत भएनन्
किसानलाई जोखिम कम होस् र उसको पूँजी कुनै पनि कारणले नडुबोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअगाडिदेखि कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमामा अनुदान सहयोग ल्याएको हो । सरकारले २०७२ सालदेखि ल्याएको यो बिमा नीतिमा त्यस बेला किसानले बिमा शुल्कको पचास प्रतिशत र सरकारले पचास प्रतिशत बेहोर्ने नीति लागू थियो । देशभरका किसान यो बिमा योजनाबाट लाभान्वित भएपछि सरकारले गत वर्षदेखि ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क बेहोर्ने र किसानले २५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो । नेपालका किसान यो बिमा लागू हुनुअगाडि कुनै रोगव्याधि, आगलागीलगायतका घटनाबाट क्षति बेहोर्न बाध्य हुँदा बिमाको प्रावधान नभएकोले हैसियत अनुसारको जोखिम बेहोर्नुपरिरहेको थियो । सरकारले किसानलाई लक्षित गरेर बिमा नीति ल्याउनुअघि ठूला किसानले मात्र बिमा गराउने र जोखिमबाट राहत पाउने गरेका थिए। सबै किसानले यो जोखिमबाट उन्मुक्ति पाऊन् भनेर सरकारले सहुलियतसहितको बिमा नीति ल्याए पनि प्रदेश नं २ को पर्सा, बारा र रौतहटका अधिकांश किसान कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमा गराएर जोखिमबाट उन्मुक्ति खोज्ने काममा लाग्न सकेका छैनन् । कृषिबाली,
२०७५ मङ्सिर १२ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
बोइलर कुखुरा धमाधम मर्न थालेपछि मूल्य घट्यो
प्रस, पोखरिया, ११ मङ्सिर/ पर्सा जिल्लामा बोइलर कुखुरा रोगका कारण धमाधम मरिरहेका छन् । केही महीनादेखि बोइलर कुखुरामा इकोलाई, गम्बरो, सिआरडी र आइबिएसजस्ता चारथरी रोगका कारण बोइलर कुखुरा धमाधम मरिरहेका छन् । बोइलर कुखुरा पालन गरेका धोबिनी गापा–३ गुलरियाका नैमुद्दीन मियाँले ७५ प्रतिशत कुखुरा मरेको बताए । उनले आप्mनो फार्ममा ४ हजार कुखुरा पालेकोमा ५ सय ग्रामदेखि ३ किलोसम्मका कुखुरामध्ये २५ सय मरेको बताए । नैमुद्दीनले पशु चिकित्सकहरूले कुखुरा फार्मको रेखदेख नगर्ने, रायसुझाव नदिने गरेको आरोप लगाए । उनले वीरगंजमा एकजना औषधिपसलले सो रोगसम्बन्धी औषधि वितरण गर्दै आएको र सोही औषधिबाट गत वर्ष यो रोगको निदान भएपनि यस वर्ष सो औषधिले पनि काम नगरेको बताए । नैमुद्दीनजस्तै धोबिनी आसवारी टोलका मनोज पटेल, पिन्टी पटेल र भिखमपुरका आलम मियाँको कुखुरा फार्ममा पनि बोइलर कुखुरा मर्नेक्रम जारी छ । केही महीनादेखि देखिएको यो रोगको निराकरण हुन नसक्दा कुखुरा मरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । पोखरिया नपाका पशु चिकित्सक कौशल झाले कुखुरा कृषकहरू आप्mनो सम्पर्कमा नरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म कार्यालयमा रोग
गुप्तचरमा जागीर लगाउने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
प्रस, वीरगंज, ११ मङ्सिर/ पर्सा प्रहरीले नेपालको गुप्तचर विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाल प्रहरीमा जागीर लगाइदिने भनेर केही व्यक्तिसँग लाखौं ठगी गरेको कसूरमा एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रसनि पदमा जागीर लगाइदिने भनेर पर्सा जिल्ला धोबिनी गापा–३ हरिहरपुर घर भई हाल वीरगंज–१३ मा डेरा गरी बस्ने २६ वर्षीय आलोक भन्ने सन्तोष पाण्डेयलाई पक्राउ गरेको छ । पाण्डेयमाथि सुर्वणपुर गापा–२ का प्रदीप ठाकुर, महागढीमाई नपा बाराका उमेश ठाकुर र धीरेन्द्र कुशवाहासँग ७ लाख २२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । कुशवाहासँग ४ लाख र बाँकी रकम ठाकुरद्वयसँग ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पाण्डेयले केहीलाई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नक्कली हस्ताक्षर गरी नियुक्तिपत्र पनि दिएको प्रमाण पर्सा प्रहरीले फेला पारेको छ । पाण्डेयलाई अदालतको आदेशमा सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
बकैया खोलामा उत्खनन ठप्प
प्रस, निजगढ, ११ मङ्सिर/ निजगढस्थित बकैया खोलाको नदीजन्य वस्तु उत्खननले पटकपटक विवाद सृजना भएको छ । निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरी ठेक्का सकार गर्ने ओम सप्लायर्स कलैयाले खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तु ग्राभेल, बालुवा, ढुङ्गा निकालेपछि स्थानीयले सोको कडारूपमा विरोध गरी पटकपटक अवरोध गर्दै आइरहेका थिए । कोहल्वी नगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाको सीमा विवादका कारण राजमार्गस्थित बकैया पुलदेखि दक्षिणतर्पm स्काभेटर प्रयोग गर्दा तनाव सृजना हुन थालेसँगै जिल्ला समन्वय समिति बाराको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निजगढ नगरपालिकाले पुलको उत्तरतर्पm प्लट नं ३ को खोलाबगरबीचमा स्काभेटरद्वारा उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई स्थान दिएको थियो । उक्त अनुसार नै खोला, बस्ती, वनलाई कुनै असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न दिइएको निजगढ नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनालले बताए । बकैया खोलाको उत्तरतर्पm ३ र दक्षिणतर्पm १ गरी कुल ४ वटा उत्खनन प्लट रिर्पोटले निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार प्लट नं १ मा ८ लाख ४१ हजार ८७५ घनमिटर, प्लट नं २ मा २ लाख ३४ हजार ३७५ घनमिटर, प्लट नं ३ मा ४ लाख ९०
अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता, तीनवटै खेलमा नेपाली टोली विजयी
प्रस, पोखरिया, ११ मङ्सिर/ कालिकामाई गाउँपालिकाको आयोजनामा मुर्लीस्थित जनता माविमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज दोस्रो दिनको तीनवटै खेलमा नेपाली टोलीले विजयी हासिल गरेका छन् । पहिलो खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)ले भारतको बेगुसराय टोलीलाई २ का विरुद्ध ३ पटक जीत हासिल गरी विजयी भएको हो । ५ चरणमा भएको खेलमा एपिएफले ३ र बेगुसरायले २ पटक जितेको थियो । यसैगरी, दोस्रो खेलमा पनि सखुवा प्रसौनीले भारतको छपरा, बिहारलाई २ का विरुद्ध ३ पटक जितेर विजयी भयो भने तेस्रो खेलमा पनि नेपाल प्रहरीले भारतको उत्तरप्रदेश आजमगढलाई २ का विरुद्ध ३ पटक जितेर विजयी भएको प्रमुख निर्णायक रामनाथप्रसाद कुशवाहाले बताए ।
प्याब्सन टी–२० क्रिकेटः आदर्श, डिएभी र माउन्ट एडमन्ड विजयी
प्रस, वीरगंज, ११ मङ्सिर/ नारायणी रङ्गशालामा जारी प्याब्सन टी–२० नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मङ्गलवार भएका तीनवटा खेलमा आदर्श, डिएभी र माउन्ट एडमन्ड विजयी भएका छन् । पहिलो खेलमा आदर्श माविले मालिनी एकेडेमीलाई ७ विकेटअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गर्दै मालिनीले निर्धारित १५ ओभरको खेलमा ७ विकेट गुमाएर ७७ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा आदर्शले ८.५ ओभरमा ३ विकेट मात्र गुमाएर विजयी लक्ष्य हासिल ग¥यो । यस खेलको म्यान अफ द म्याच राहुल गुप्ता घोषित भए । दोस्रो खेलमा डिएभीले विद्यासागरलाई ५ रनअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गरेको डिएभीले निर्धारित १५ ओभरको खेलमा ८ विकेट गुमाएर ९५ रन जोडेको थियो । प्रतिउत्तरमा विद्यासागर १२.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ९० रनमा सीमित भयो । सो खेलको म्यान अफ द म्याच पिन्टु यादव घोषित भए। यसैगरी, तेस्रो खेलमा माउन्ट एडमन्ड माविले ज्ञानदा एकेडेमीलाई ८ विकेटअन्तरले पराजित ग¥यो । पहिले ब्याटिङ गरेको ज्ञानदा १५ आोभरमा ५ विकेट गुमाएर ७३ रनमा सीमित भयो । यो लक्ष्यलाई माउन्ट एडमन्डले ८.२ ओभरमा २ विकेट मात्र गुमाएर पूरा ग¥यो । सो खेलको म्यान
नाममा अल्झिएको राजनीति
श्रीमन्नारायण नेपालमा सङ्घीयतालाई देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आप्mनो राजनीतिक एजेन्डा नबनाएका कारण आज पनि यो विषय हाम्रFे निम्ति ‘अन्धोले हात्ती छामेर त्यसको व्याख्या गरे’जस्तै अन्योलको अवस्था कायमै छ । सङ्घीयताको विषय देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा भइदिएको भए यस विषयमा व्यापक अभ्यास, चिन्तन एवं गृहकार्य भएको हुने थियो । प्रदेशहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, नामाकरण, प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक राजधानीलगायतका विषयमा खासै समस्या हुने थिएन । सङ्घीयतालाई आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ देखि २०७४ सालसम्म सङ्घर्ष ग¥यो तर सोही वर्ष यस पार्टीलाई नै तिलाञ्जलि दिने काम भयो । २०६४ सालदेखि अस्तित्वमा आएका मधेसी दलहरूले पनि यस विषयमा कहिल्यै इमानदारी एवं गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरेनन् । मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश नं २ मा पनि प्रदेशको नामाकरण, भाषा र राजधानीको विषयमा मतैक्य कायम हुन सकेको छैन । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि यस प्रदेशमा नयाँनयाँ भाषाहरू अस्तित्वमा आउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले हरेक आ